အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အလင်းရောင် ပေးကြသူများ
12 Responses to “အလင်းရောင် ပေးကြသူများ”
yes... racial discriminaton is now very live and dead matter between us....
Though nowadays ppls are enlightened , we still face racial discrimination....
Thanks for this post.....cos it can warn to avoid it....
But if we have humanitarian spirit,, it seems to be plausible to overcome it.
ဟုတ်တယ် မမရေ...အဲဒါတော့ထောက်ခံတယ်...ကိုယ်က အကျိုးကိုမမျှော်ကိုးပဲ စိတ်သန့်သန့်လေးနဲ့သာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကူညီပေးလိုက်...ကိုယ့်အလှည့်ကျရင်လဲ အလိုအလျောက်ကူညီမယ့်သူတွေက ပေါ်လာတာပဲ...ကိုယ်တွေ့ပါ
ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာစေတနာတိုင်းအတွက် အတိုင်းမတိတဲ့ ပီတိနဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ တုန့်ပြန်မှု လေးတွေလည်း ရရှိပါတယ်။ စာနာဖေးမခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေရင် နေပျော်ဖွယ် လူ့ဘောင်လောကသစ်ဖြစ်လာမှာပါပဲ
Yeah!! In our life we should giveahand whenever as much as we can to those who are in need for help. This translation is really great and it can remind us not to forget to help if we getachance to help others. Thank you Ma Chaw Chaw, Keep it up!!!
ကူညီတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် ပြန်တွေးတိုင်း ပီတိဖြစ်စရာတွေပါ။
ကျနော် ရေးဖူးတဲ့ ကျနော် ကူညီမိ အပြစ်ရှိလိုမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်ပေါ့နော်။
အများအကျိုးကို စေတနာနဲ့ဆောင် တတ်ရင်
အရောင်လက်လာမယ့် မေတ္တာ တရားတွေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေက
ကြယ်တွေ လို အများကြီး လင်းလက် နေနိုင်ကြမှာပါ...
အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ မမျှော်ကိုးပဲ..စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ကူညီတတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးပေးတတ်ပုံက မယုံနိုင်စရာတွေပါပဲဗျာ...။ နော့်...။
ကိုယ့်ကို ကူညီဖူးတဲ့သူကို နှလုံးသားထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့နော်.။ သဒ္ဓါလည်း အကူအညီလိုနေတဲ့သူတွေကို စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်း ကူညီခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
In Myanmar, on the high-way road, it was very difficult to get help from people driving their cars on the road. Bec they usually afraid robbers who may pretend getting in trouble.
စာနာဖေးမခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေရင် နေပျော်ဖွယ် လူ့ဘောင်လောကသစ်ဖြစ်လာမှာပါပ
.ပိုးစုန်းကြူးလောက် အလင်းရောင်လေးနဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လောကကြီးကို
ကူညီ ထွန်းလင်းပေး သွားမှာပါ...............
ဒီလို စာတွေကို မေးပို့ပေးလိုရမလား ခဗျာ..